16 articles under NGO / Social Enterprise
How do I speak more confidently?
ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့ စကားဘယ်လိုပြောရမလဲ။ "ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်တာဟာ အောင်မြင်မှု ရဲ့ သော့ချက်ပါပဲ"။ ပရိသတ်တွေ အများကြီးရဲ့ ရှေ့မှာ စကားပြောတဲ့အချိန် ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မိတ်ဆွေသစ်တစ်ဦးနဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေါ်မူတည်ပြီး ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှ...
How do I pave alternative roads to success asayouth?
လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မိမိရဲ့ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းကို ဘယ်လို ထိုးဖောက်မလဲ။ " ကျောင်းမှာ အဆင့်ကောင်းကောင်းရတာဟာ အောင်မြင်မှု ဆီကို သွားဖို့အတွက် တစ်ခုတည်းသော လမ်းကြောင်းလား။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲဟာ သင့်ရဲ့ ဘဝကို ဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့...
How should I spend my free time to haveapositive impact on my career?
အားလပ်ချိန်ကို သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင် လမ်းကြောင်းအပေါ်မှာ အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်အောင် ဘယ်လို သုံးမလဲ။ သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်ကို အဓိပ္ပာယ် ရှိရှိ အသုံးချခြင်းက တီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှု၊ တက်ကြွမှု၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ မိမိကိုယ်မိမိ ကျေနပ်မှ...
How extra curricular activities can boost your resume?
ကျောင်းပြင်ပ လုပ်ငန်းတွေဟာ သင့်ရဲ့ လျှောက်လွှာကို ဘယ်လိုများ မြှင့်တင်နိုင်ပါသလဲ။ နာမည်ကြီးစကားပုံတစ်ခုလိုပါပဲ။ " အတွေ့အကြံုမရှိဘဲ အလုပ်မရနိုင်သလို၊ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့လည်း အတွေ့အကြံုဆိုတာ ဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး " ဒီ့အတွက် သင့်မှာ အတွေ့အကြံုတွွေ မရ...
How do I foster lifelong learning?
ဘဝတစ်လျှောက် သင်ယူခြင်းအတွက် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရနိုင်မလဲ။ ကျွန်မတို့၏ အမြဲ ပြောင်းလဲနေသော လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင် ကြီးသည် နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများ ဖြင့် ရှင်သန်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့် … ယခုလည်း ခေတ်အမှီသိရှိပြီး နောင် အနာဂတ်တွင် လည်...
အချိန်ကို ဘယ်လို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချ ကြမလဲ။ တစ်နေ့မှာ ၂၄ နာရီ လူ တိုင်း ရှိ ကြ ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် …. လူတစ်ချို့ က တစ်ခြား လူတွေထက် ဘာလို့ အကျိုး ပို ရှိ စွာ အသုံး ချ နိုင် ကြ တာ လဲ။အချိန်ကို အကျိူး ရှိရှိ အ သုံးချ နိုင် မဲ့ နည်...